Ukukhetha Izinkunzi Ezinhle Zokufuyela ubisi
Ukukhiqizwa ubisi kuqala ngemuva kokukhipha. Ngakho-ke, ukuthola izinkomo ezikhulelwe kungenye yezenzo ezibaluleke kakhulu zokuphatha epulazini lebisi. Imiphumela emibili ingenzeka lapho izinkomo zikhulelwa: Okokuqala kungenzeka ukuthi isikhathi se-lactation, futhi okwesibili, sibeka ubuhle bokuzalwa kwezingane.
Ukuzalisa izilwane zasemapulazini ukuthuthukisa ngamabomu umhlambi wezinkomo noma ukuthuthukisa izici ezithile ezifana nokwandisa ubisi. Ukuthuthukiswa kwe-genetic kwenzeka uma abazali bakhe bekhetha kangcono. Njengoba izinkomo zakha umhlambi wezimbuzi, kulandela ukuthi izinkunzi ezisetshenziselwa ukuthola izinkomo ezikhulelwe zithole ukunakekelwa kwemfuyo.
Ukukhethwa kukaSire (ubaba) kunomthelela wesikhathi eside ekuhlosweni kofuzo lwemfuyo yobisi. Ukusebenza kokukhiqizwa ngamadodakazi okuqokwa okhethiwe namhlanje kubonakala eminyakeni emine kamuva. Umhlambi wezokuhweba wamanje wezilwane unamakholo azalwa eminyakeni emithathu kuya kweyisishiyagalombili eyedlule.
Inhloso yokuzalanisa imfuyo yobisi kufanele ihlose ekuthuthukiseni izici zesitokisi esenziwe. Njengomhlambi wezimbuzi kubangelwa ukhiqiza ubisi, kunengqondo ukukhetha izinkunzi ezinezici eziphezulu zokukhiqiza ubisi ngoba lokhu kwandisa amathuba okukhiqiza amadodakazi. Noma kunjalo, ukukhethwa kwenkunzi ngesici esisodwa njengokwenyama ubisi akukhuthazwa njengoba kunezinye izici ezithinta nokusebenza kwezomnotho kwezinkomo ezifana nalezi:
Izinkomo ezikhiqiza ubisi obuningi kusukela ekuphakelayo okutholakalayo.
Ubisi kumele bube namaphesenti aphezulu namaprotheni.
Izinkomo kufanele zibe nempilo ende yokukhiqiza isikhathi eside.
Izinkunzi ziqathaniswe Ngokuzalisa okungekho Kwemvelo
Izindawo ezikhiqiza ubisi ezentengiselwano zisebenzisa ukusabalalisa okufakelwayo (AI) ukuze athole izinkomo ezikhulelwe, noma kunjalo, isevisi yemvelo ingasetshenziswa futhi.
Izinkunzi zemisebenzi yemvelo kufanele zithengwe kubalimi abasungulwe iqhaza ohlelweni lokurekhoda ubisi lwesizwe. Lolu hlelo luhlinzeka ngamagugu okuzalanisa okulinganiselwe (EBV) kuzo zonke izilwane emhlambini. Izindinganiso zokuzala zibonisa ukufaneleka kwezakhi zofuzo. Ukwaziswa okufanayo kuyatholakala ngezinkunzi ezizalwe emhlambini. Ungalokothi uthenge izinkunzi ezingenalo ulwazi lofuzo.
Izindleko zokudla zezinkunzi zingaba ngu-R30 / ngosuku (2018). Lokhu akubandakanyi izindleko zezinkunzi kanye nomsebenzi. Uma inkunzi isetshenziselwa izinkomo ezingu-10 ngonyaka, izindleko zokulinganisa zingaba ngu-R500 ngenkonzo ngayinye.
I-Semen ye-AI ingathengwa ezinkampanini zakwa-AI zendawo nezangaphandle. Iziqondiso ze-Bull zinjengezincwajana ezinenani elikhulu lolwazi lwezofuzo ngenkunzi ngayinye kanye nokwaziswa ngokufaneleka kofuzo okwenziwe ubisi nokuziphatha komzimba wenkomo ngayinye. Omunye utshani wezilwane usetshenziselwa ukuxoshwa, kepha phakathi kwezinhlanga ezimbili no ezine kungadingeka ukuze uthole inkomo ekhulelwe. Lokhu kuxhomeke emasu kanye nekhono lomsunguli.
Intengo yemigqa isukela ku-R60 kuya ku-R275 (2017).
Indlela Yokukhetha Inkunzi
Ukuze ukhethe izintambo, njengesiqalo, thola uhlu lwazo zonke izinkunzi ezikhona ezivela enkampanini yezinyosi noma i-agent ye-semen. Njengoba kunenani elincani lezinkunzi ongakhetha kuzo, ukukhetha kwe-sire kuba nzima, ngakho-ke uhlu kumele luqukathe okungenani izinkunzi ezingu-20. Lolu hlu lufanele futhi luqukathe intengo ngayinye yotshani.
Iziqondiso ze-Bull zivame ukuba nezinhlawulo 'ngokufaneleka kwenetha'. Ukufaneleka komnatha, kuhlanganisa izici ezingu-12 ezihlukene zibe nenani elilodwa.
Izinkampani ezithile zezinsikazi zinikeza insizakalo kubalimi lapho izinkomo zomlimi zilinganiswa khona ngokwakhiwa kwazo, futhi uhlelo lokuzalanisa luyakhiwa ngaleso sikhathi. Ulwazi mayelana nezinkomo lufakwa ohlelweni lwekhompiyutha, oluzogqugquzela ngokuzenzekelayo izinkunzi ezithile ngokuvumelana nezici ezidingekayo kulolu fula epulazini.
Kungabuye futhi iphakamise izinkunzi ezithile ngezinkomo ngamanye. Lezi zinhlelo zisebenzisa ukulungiswa kokulungisa ukuze kuthuthukiswe izici zokuguqula umzimba ngenkathi kuthuthukiswa kanye nokugcina ukukhiqizwa ubisi.
Lokhu kungaba nje ukuhlanganiswa kwama-EBV amafutha namaprotheni ukukhiqiza ngokusebenzisa amanani amabi we-fat kanye namaprotheni njengeziqondiso. Inkomba ingabuye isetshenziselwe ukufaka ukukhiqizwa ubisi, ukuzala, ukuphila okukhiqizayo noma izici zokuguqula umzimba njengesiqu.
Hlela uhlu lwezinkunzi zezinkomba ezikhethiwe kusukela phezulu kuya ezansi. Khetha, ngokusho kwenkomba, izinkunzi ezinhlanu ezinhle kakhulu ezizosetshenziswa emhlambini.